सत्तारुढ दलहरु बेइमान देखिएको प्रचण्ड आरोप, संविधानसभामा बहुमत भनेर कसले भनेको छ ? « MNTVONLINE.COM
सत्तारुढ दलहरु बेइमान देखिएको प्रचण्ड आरोप, संविधानसभामा बहुमत भनेर कसले भनेको छ ?
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सत्तारुढ दलहरु काँग्रेस र एमालेले इतिहासमा भएका आन्दोलनहरुलाई नकार्दै राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, १२ बुँदे सहमति लगायतमा सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई दलहरुले आपूmखुशी दुई तिहाईको दम्भमा व्याख्या गर्न थालेको बताउनुभयो । अन्तरिम संविधान अनुसार जाँदा पनि सहमतिपछि प्रक्रियाकै आधारमा संविधान जारी गर्ने भन्दै उहाँले सहमति कसरी भाँडियो भन्ने खुलासा गर्नुभएको छ ।
एमाओवादी अध्यक्षका अनुसार केही नेताहरु सहमति हुनै नदिने खेलमा लागेका छन् । तिनीहरुले सहमति बन्न लागेको वातावरणलाई भाँड्न मुख्य भूमिका खेलेका हुन् । सहमति भएन अब प्रक्रियामा जानै पर्दछ भनेर नेताहरुले भाँडेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा भूमिका निर्वाह गरेको आरोप प्रचण्डको छ । पत्रकारहरुले गहिरोगरी हेरेमा सहमति भाँड्ने नेता चिनिने भन्दै उनले रामचन्द्र पौडेलतिर संकेत गरेको जस्तो देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले पनि सहमतिको शब्द सुन्नासाथ ईरिटेड भएको व्यवहार गरेको प्रचण्डको भनाई छ । हामीले हाम्रो रिजर्भेसन राखेर जान्छौं भन्दाभन्दै अब बहुमतको आधारमा दुई तिहाईले संविधान जारी गर्ने हो भन्ने नेताहरुले नै अहिलेको यो परिस्थितिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, प्रचण्डको भनाई छ ।